हो, दुनियाँलाई थाहा छ, तपाई निसन्तान हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईलाई सन्तानप्रति कुनै मोह पनि छैन। तपाईका आफन्तको राजनीतिमा खास योगदान पनि छैन। तैपनि तपाईका सयौं छोराछोरीले देश निर्वाध लुटिरहेका छन्। तपाईले देशलाई आफन्तको भर्तीकेन्द्र बनाउनुभएको छ। सत्ताको नियुक्तिमा झापाली र अराजकहरुलाई छानीछानी हालिरहनुभएको छ। त्यसमा इमान्दार र क्रान्तिकारी आफन्त र झापाली परेका छैनन्। जो इमान्दार छन्, ती अपमानित छन्, जो भ्रष्ट छन्, ती तपाईका प्रिय छन्। देशमा यस्तो ब्रह्मलुट मच्चाएर अरुलाई उपदेश दिने तपाईको नैतिकता के ? तपाईका सन्तान नभएको कुण्ठा प्रचण्डमाथि पोखेर तपाई कुन संस्कृति स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? सारा नेपालीले जवाफ चाहन्छन्।
Tagsअध्यक्ष प्रचण्ड केपी शर्मा ओली
‘युद्ध सधैका लागि अन्त्य होस्’
कमरेडहरु, ओलीको दास बन्ने कि कम्युनिस्ट योद्धा ?
कमरेडहरु, ओलीको दास बन्ने कि नेकपाको योद्धा ?
kp arajak bibekhin naitik patan bharasta kalangkit adi etc ?desh ra janata ko marma biparit niji swartha asepase ………???